कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २८, मंगलबारको राशिफल ! - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २८, मंगलबारको राशिफल !
प्रकाशित : सोमबार, साउन २७, २०७६२२:४८ पब्लिक आवाज /संवाददाता
मनको एकाग्रता कम रहँदा दुखि रहनु हुनेछ । शारीरिक रुपले व्यग्रताको अनुभव रहनेछ । आवश्यक दस्तावेजमा अधिक ध्यान दिनु होला । मध्याहन पश्चात कार्य प्रारम्भ गर्दा सरलता रहनेछ । पारिवारिक वातावरणमा सुधार हुनेछ । धार्मिक कार्यसंग सम्बन्धित प्रसङ्ग बन्नेछन् । अधिक खर्चबाट बच्नु होला । मित्रको साथ रुचिपूर्ण भोजनको आनन्द लिन सक्नु हुनेछ ।
व्यवहारिक कार्य सक्काउन शुभ दिन रहेको छ । मित्रको साथ मिलन हुनेछ । सन्तानको प्रगतिले मन पुलकित हुनेछ । प्रवास पर्यटनको योग छ । मध्याहन पश्चात शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । स्वजनको लागी धन खर्च हुनेछ । उनीहरुको साथ मतभेत पनि हुनेछ । आध्यात्मिक प्रवित्तिमा सक्रिय रहँदा आनन्द प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।
व्यापारी वर्गको लागी शुभ दिन रहेको छ । सफलता र धन प्राप्तिको योग छ । पिताबाट लाभ हुनेछ । लक्ष्मीको कृपादृष्टि रहनेछ । व्यवसायमा कार्य सफलता र लाभ प्राप्तिको योग छ । मित्रबाट लाभ हुनेछ । मश्याहन पश्चात कुनै रमणीय स्थलमा जाने आयोजन बन्नेछ । आकस्मिक धन लाभको योग छ ।
दिनको प्रारम्भ मानसिक तनाव र अशांतिपूर्वक हुनेछ । शारीरिक रुपले आलाश्य र शिथिलता रहनेछ । पेट सम्बन्धि समस्या आउनेछ । कुनै पनि कार्यमा भाग्यले साथ नदिएको अनुभव गर्नु हुनेछ । सन्तानको विषयमा अधिक चिन्ता रहनेछ । मध्याहन पश्चात मनमा प्रशन्नता र शारिरमा स्फूर्तिको अनुभव हुनेछ । व्यापारी वर्गलाई धन प्राप्ति हुनेछ ।
आजको दिन तपाइँको लागी मध्यम फलदायी रहनेछ । आचारविचार संयम राख्नु होला साथै अनैतिक कार्यबाट टाढा रहनु होला । शारीरिक र मानसिक श्रम अधिक रहनेछ । स्वास्थ्यमा अस्वस्थता उत्पन्न हुनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । सन्तानको विषयमा चिन्ता रहँदा निरर्थक खर्च हुन सक्दछ ।
कला क्षेत्रको प्रदर्शनले सामाजिक दृष्टिबाट यश किर्ति र मन-सम्मान प्राप्त हुनेछ । व्यवसायको क्षेत्रमा भागिदारको लागी अनुकुल समय छ । मनोरंजनको क्षेत्रमा आनदपूर्वक दिन बित्नेछ । धन लाभको सम्भावना छ । मध्याहन पश्चात स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । आकस्मिक लाभ हुने सम्भावना छ ।
आजको दिन तपाइँको लागी शुभ फलदायी रहनेछ । कुनै पनि कार्य दृढ मनोबल र आत्मविश्वासपूर्वक गर्न सक्नु हुनेछ । मनलाई शान्त राख्नु होला । घरमा आनन्ददायी र शान्तीप्रद वातावरण रहनेछ । वाणीमा संयम राख्नु होला । कलाकारको लागी आजको दिन शुभ रहेको छ । कार्य निपुणता र कला प्रदर्शनको अवसर मिल्नेछ ।
साहित्यिक प्रवृत्तिमा रुची बढ्नेछ । विधार्थीको लागी अनुकुल समय छ । शेयरमा लाभ हुनेछ । दृढ मनोबल र अत्नाविश्वास रहनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । प्रतिस्पर्धी समक्ष विजय प्राप्त हुनेछ । प्रत्येक कार्य शान्ती संग गर्न सक्नु हुनेछ ।
माताको स्वास्थ्यमा भैरहेको परिवर्तन र परिवारको अनिच्छनीय वातावरणले तपाइँको स्वस्थतामा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ । धन र किर्तिको हानी हुनेछ । मध्याहन पश्चात तपाइको मन सृजनात्मक प्रवृत्ति तर्फ आकर्षित हुनेछ । प्रसन्नताको अनुभव गर्नु हुनेछ । स्वभावमा प्रेम भावमा वृद्धि हुनेछ । विद्यार्थीको लागी आजको दिन शुभ रहेको छ ।
जीवनसाथीको साथ अधिक मधुरतापूर्ण व्यवहार हुनेछ । मित्रको साथ पर्यटनमा जाने आयोजना बन्नेछ । भाई एवम् स्नेहीजनको साथ राम्रो सम्बन्ध रहनेछ । मान-सम्मानमा वृद्धि हुनेछ । प्रतिस्पर्धी माथि विजय प्राप्त हुनेछ । मध्याहन पश्चात आकस्मिक दुर्घटनाको कारण मानसिक स्वस्थता अस्वस्थतामा परिणत हुनेछ ।
खर्चमा संयम राख्नु होला । साथै क्रोधमा पनि संयम राख्नु होला । कसैको साथ वादविवाद नहोस् यसको पूर्ण ध्यान राख्नु होला । मनबाट नकारात्मक विचार हटाउनु होला । परिवारमा सुख शान्तीपूर्ण वातावरण बन्नेछ । कार्य सफलता मिल्नेछ ।
मीन (दि, दु, थ , झ, ञ, दे, दो, च, चि )
घरमा धार्मिक कार्य हुनेछ । परिवारमा आनन्दमय वातावरण बन्नेछ । कार्य सफलता मिल्नेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको ध्यान राख्नु होला । नयाँ कार्यको लागी शुभ दिन रहेको छ । मध्याहन पश्चात वाणी र व्यवहारमा सन्तुलन राख्नु आवश्यक छ । खान-पानमा ध्यान राख्नु होला ।
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार २५ गते बुधबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन २२, बुधबारको राशिफल !